Xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya katirsan oo Ahlu-Sunnah Waljameeca la kulmay. – Radio Daljir
Febraayo 24, 2012 12:00 b 0
Cabudwaq,Feb 24 -Xildhibaano katirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa gaaray degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud,halkaasi oo ay ka arrimiyaan maamulka Ahlu-Sunah Waljaamaaca ee gobolada dhexe ee Soomaaliya.
Xildhibaanada oo tiradoodu ay tahay shan mudane ayaa kula kulmay degmada Caabudwaaq saraakiisha maamulka Ahlu-Sunah Waljamaaca,sida uu Radio Daljir u sheegay xildhibaan Cabdiweli Maxamed Sheekh oo ka mid ah xildhibaanada gaaray degmada Caabudwaaq.
“Saaka tobonkii ayaanu isku nimid waana is waraysanay,sideedda guud anagu carrada tan waxaanu ku nimid kow ahaanshaha aanu nahay dad deegaankan u dhashay iyo inay masuuliyadi naga saarantahay arrimaha aanu u nimidna,si yar oo kooban hadaan uga hadalno waxa weeye arrimaha aanu masuulka ka wada nahay dadka iyo deegaanka”ayuu yiri xildhibaan Cabdiweli Maxamed Sheekh.
Socdaalka ay xildhibaanada baarlamaanka Somaaliya kamid ah ay ku tageen magalaada Caabudwaaq ayaa yimid,kadib markii ay dhowaan ka qaybgaleen shirkii Garoowe 2 ee lagu soo gunaanaday magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Mareykanka oo sheegtay duqayn lagu dilay saraakiil katirsan Al-Qaacidda
War saxaafadeed: Xoraynta Baydhaba iyo Xudur waa dhamaadka Al-shabaab.